Ukubethelwa kukaYesu - Mateyu 27: 32-56 - Ibali leBhayibhile
Oko iBhayibhile isitshela ngokubethelwa kukaYesu
UYesu Kristu , umlingana ophakathi kobuKristu, wafela emnqamlezweni wamaRoma njengoko kubhalwe kuMateyu 27: 32-56, uMarko 15: 21-38, uLuka 23: 26-49, kunye noYohane 19: 16-37.
Ukubethelwa kukaYesu Kristu - Isishwankathelo seNdaba
Ababingeleli abakhulu namaYuda aseSanhedrin bammangalela uYesu ngokunyelisa , befika kwisigqibo sokumbulala. Kodwa okokuqala babedinga iRoma ukuba bavume isigwebo sabo sokufa, ngoko uYesu wathatyathwa kuPontiyo Pilato , urhulumente waseRoma eJudiya.
Nangona uPilato wamfumana engenacala, engakwazi ukufumana okanye esenza isizathu sokugweba uYesu, wayesaba izihlwele, ebavumela ukuba bathethe isigqibo sikaYesu. Ukuxhaswa ngababingeleli abaziintloko bamaYuda, izihlwele zazisithi, "Mbethelele!"
Njengoko kwakuqhelekileyo, uYesu wayetyhulwa esidlangalaleni, okanye wabethwa, enexubhu elinesikhumba ngaphambi kokubethelwa kwakhe . Iincinci ezincinci zetsimbi kunye neethambo ze-bone ziboshwe kwiiphelo zesikhumba ngasinye, kubangela ukucutha okunzulu kunye nemivimbo ebuhlungu. Uhlekisiwe, washaywa entloko kunye nabasebenzi waza waphosa. Isithsaba esinameva sasibekwa entloko kwaye wahlanjululwa uhamba. Ubuthakathaka ukuba athwale umnqamlezo wakhe, uSimon waseKirene wanyanzelwa ukuba amthwale.
Waholwa eGolgotha apho wayeza kubethelelwa khona. Njengoko kwakukho isiko, ngaphambi kokuba bambethele esiphambanweni, umxube weviniga, i-gall, ne- myr . Ukusela kwakuthiwa kunciphise ezinye iintlungu, kodwa uYesu akazange avume ukusela.
Izipikili ezinjengezinkuni zaziqhutyelwa kwiintonga zakhe kunye neenyawo, zimbambelela emnqamlezweni apho wayebethelelwe khona phakathi kwalaba baphuli beentyala ezimbini.
Umbhalo ongentla ngentloko yakhe ufundela ngokukloloda, esithi "NguKumkani wamaYuda." UYesu waxhonywa emnqamlezweni ngenxa yokuphefumula kwakhe kokugqibela, ixesha elidlulileyo malunga neeyure ezintandathu .
Ngaloo xesha, amasosha ayenzela inkatho ngenxa yeengubo zikaYesu, ngelixa abantu bebedlula ngokumemeza nokuhlambalaza. Ukususela emnqamlezweni, uYesu wathetha nonina uMariya kunye nomfundi uYohane . Wamemeza noyise, wathi: "Thixo wam, Thixo wam, undithini na?"
Ngelo xesha, ubumnyama bumboze ilizwe. Emva kancinci, njengoko uYesu wanikela umoya wakhe, inyikima yagubungela umhlaba, yaqhawula isigqubuthelo seTempile ezimbini ukusuka phezulu ukuya phezulu. Ingxelo yeVangeli kaMathewu ithi, "Umhlaba wazamazama kwaye iingqungquthela zahlulwa. Amangcwaba avuleka kwaye imizimba yabantu abaninzi abangcwele ababefile bavuswa."
Kwakuqhelekileyo kumajoni aseRoma ukuba abonise inceba ngokuphula imilenze yezobugebengu, oku kubangela ukuba ukufa kufike ngokukhawuleza. Kodwa ngalobu busuku kuphela amasela enemilenze ephukile, kuba xa amajoni afika kuYesu, amfumana sele efile. Kunoko, bahlaba ihlangothi lakhe. Ngaphambi kokushona kwelanga, uYesu wanyulwa nguNikodemo noYosefu waseArimatiya waza walala engcwabeni likaYosefu ngokwemiqathango yamaYuda.
Amanqaku anomdla kwiBali
Inkolo yobuKristu ifundisa ukuba ukufa kukaYesu Kristu kwanikela ngomnikelo wokuhlawulela othe tye ngenxa yezono zabo bonke uluntu, ngaloo ndlela ukwenza isiphambanxu, okanye ukuwela , enye yeempawu zobuKristu .
Nangona zombini iinkokheli zamaRoma kunye namaYuda zinokuthi zibandakanyeke kwisigwebo nokufa kukaYesu Kristu , yena ngokwakhe wathi ngobomi bakhe, "Akukho mntu uyithatha kum, kodwa ndibeka phantsi kwam ngokwam. kunye negunya lokuyithatha kwakhona. Lo myalelo ndawamkela kuBawo. " (Yohane 10:18 NIV ).
Ikhuphelo okanye isigqubuthelo seThethempeli lahlukanisa uMoya oyiNgcwele oyiNgcwele (ohlala ebusweni bukaThixo) ukusuka kwenye indlu. Nguye kuphela umbingeleli omkhulu ongena khona kanye ngonyaka, kunye nomnikelo wokubingelelela izono zabo bonke abantu. Xa uKristu wafa kwaye ikhethini yachithwa ukusuka phezulu ukuya phezulu, oku kubonakalisa ukutshatyalaliswa komqobo phakathi kukaThixo nomntu. Indlela yavulwa ngoKristu ngomnqamlezo. Ukufa kwakhe kwanikela ngomnikelo opheleleyo wesono ukuze ngoku bonke abantu, ngoKristu, bangene kwisihlalo sobabalo.
Xa iinkokeli zonqulo zafika kwisigqibo sokumbulala uYesu, babengenakucinga ukuba unokuthetha inyaniso-ukuba wayengumMesiya wabo. Njengoko ababingeleli abakhulu bamgweba uYesu ngokufa, benqaba ukumkholelwa, batywinisa ikusasa labo. Ngaba nawe, wenqaba ukukholelwa oko uYesu akutshoyo ngaye? Isigqibo sakho malunga noYesu sinokusinceda sakho isiphephelo sakho, ngonaphakade .
Iiminyaniso zeBhayibhile zokuva uThixo
'Isibhedlele jikelele' Iindaba zeNkwenkwezi zethu kunye neeNkwenkwezi zangaphambili
Ngubani Owokuqala I-Hockey yeMillion-Dollar Man?
Izindlu zanamhlanje, Uhambo lweZibonelelo ze-20 leNkulungwane
Kutheni i-Ladybugs ihlala neendawo?
Ziyintoni na zonke izilungiso ezibhekiselele kwiPhepha lam?